နေ့စွဲ : 2021-01-11
အမည် : Hanna Yuri
လတ်တလော ကျော်ြကားသောအရာများ : 78
SSK Base Set လေးထဲမှာပါတဲ့ Fresh Aloe Water Skincare Set လေးနဲ့ Star Aura Cover Cushion လေးကို ကြိုက်နှစ်သက်လို့ ကိုယ်တိုင် ဝယ်ယူအားပေးတဲ့ ညီမလေး Hanna Yuri ရဲ့ ပုံအလှလေးတွေနဲ့ အတူ သူကိုယ်တိုင်ရေးထားတဲ့ SSK ရဲ့ Base Set လေးအကြောင်း Real Review လေးကို တူတူဖတ်ကြည့်ရအောင်နော် ~
ချောမွေ့လှပတဲ့Makeup Lookတွေ ပိုင်ဆိုင်ဖို့အတွက် Base Makeup က အရေးပါတယ်နော်
Makeup လိမ်းတဲ့အချိန် မျက်နှာအသားအရည်ကလည်း ခြောက်နေတယ်၊အရေခွံအလိတ်လိတ်တွေလိုဖြစ်သွားရင် Makeup လိမ်းရတာ အဆင်မပြေတော့ဘူးပေါ့! အထူးသဖြင့် ဆောင်းဝင်လာတော့ အသားအရည်ခြောက်သွေ့တဲ့အချိန်တွေပေါ့ ကဲ့ အဲ့လိုတွေမဖြစ်ရအောင် Basic SkinCare ကနေ Base Makeupအထိ အလွယ်တကူလိမ်းလို့ရတဲ့ ပစ္စည်းရယ် နည်းလမ်းတွေရယ်
အစိုဓါတ်ကို ထိန်းသိမ်းပေးမယ့် ပစ္စည်းလေးကတော့
Star Secret Korea က Fresh Aloe Water Set
ဖြစ်ပါတယ်။အသားအရည် မညီတာတွေ ပြန်ညှိပေးပြီး
တနေကုန်အစိုဓာတ်ကို ဖြည့်ပေးနိုင်တဲ့ ရှားစောင်း
တိုနာနဲ့ နို့ရည်လေးဖြစ်ပါတယ်။ရှားစောင်းလက်ပတ် ပါတော့ လိမ်းလိုက်ရင် အသားအရည်ကိုအေးသွားတာပဲ။Alcoholမပါဝင်လို့ sensitiveဖြစ်တဲ့ အသားအရည်၊Combination Skin,Dry Skin နှင့် Normal Skin
SkinCareပြီးတော့ Foundationတွေ Concealer ရှုပ်နေအောင်မလုပ်တော့ပဲ ပစ္စည်းတစ်ခုထဲနဲ့ Base Makeup လိမ်းလိုက်မယ်။
အသုံးပြုမယ့်ပစ္စည်းက Star Aura Cover Cushion ဖြစ်ပါတယ်။သူက မှဲ့ခြောက်၊တင်းတိတ် နှင့် အမဲစက်လေးတွေကို ဖုံးပေးနိုင်လို့ သဘာဝဆန်ဆန်လေးနဲ့ Glow Lookလေးရနိုင်ပါတယ်။ခုလိုတွေ ဖုံးပေးရုံတင်မက ပေါ့ပါးတဲ့အတွက် လိမ်းလိုက်တဲ့အခါ မိတ်ကပ်ထူထူဖှုန်ဖှုန် မဖြစ်နေပါဘူး။ SPF 50 + ပါဝင်တာကြောင့် နေလောင်ဒဏ်လည်း ကာကွယ်ပေးပါတယ်။မိတ်ကပ်လိမ်းတဲ့အခါ Stepတွေအများကြီး မသုံးဘဲ အလွယ်တကူလေး ပြင်နိုင်အောင် ဒီProductsလေးတွေကို ညွန်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်
အခုဆို Star Secret Korea မှာလျှော့စျေးလည်းရှိတယ်တဲ့ SSK BASE SETထဲမှာ ဘာတွေပါလဲဆိုရင်
1. Aloe water Toner Emulsion
3. JK Mask 3pcs
4. gold toner mini
၄မျိုးပါတဲ့ Set 1 setကို ငါးသောင်းငါးထောင်ကျပ်
ကနေ သုံးသောင်းသုံးထောင့်ကိုးရာကျပ်ထိ ကို